Laacibkii Ka Caawiyey Inuu Saldhigo Chelsea, Qiimaha Guushii 4-0 Ahayd Ee Uu Ka Gaadhay Man United Iyo Antonio Conte Oo Xasuustay Waqtigiisii Stamford Bridge - Gool24.Net
Laacibkii Ka Caawiyey Inuu Saldhigo Chelsea, Qiimaha Guushii 4-0 Ahayd Ee Uu Ka Gaadhay Man United Iyo Antonio Conte Oo Xasuustay Waqtigiisii Stamford Bridge
Tababaraha Inter Milan, Antonio Conte ayaa magacaabay laacibkii ka caawiyey inuu saldhigo Chelsea xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee uu tababaraha u noqday, markaas oo uu kula guuleystay horyaalka Premier League.
Gool uu Michy Batshuayi waqti dambe u dhaliyey ciyaar ay ka hor tageen West Brom ayaa Chelsea ay ku qaadday horyaalka Premier League saddex sannadood ka hor maanta oo kale, waxaanu xili ciyaareedkaasi ahaa kii sagaalaad ee John Terry oo xidhan funaanadda Blues uu ka ciyaarayo horyaalka.
Antonio Conte ayaa ka hadlay guushii ay xili ciyaareedkaas Blues gaadhay, waxaanu u mahadceliyey John Terry oo uu sheegay inuu ka caawiyey inuu saldhigo Stamford Bridge, waxaanu yidhi: “Sharaf weyn ayay ii ahayd inaan Chelsea kusoo tababaro halyeeyo sida John Terry.
“Waxaan ka hadlaynaa nin sare, nin dhab ahaan u wanaagsan kaddibna ahaa ciyaaartoy sare. In badan ayuu i caawiyey xili ciyaareedkaygii ugu horreeyey garoonka bannaankiisa. Wuxuu muhiim ka ahaa garoonka tababarka, xilliga jimcisga wuxuu ilaalin jiray in dareenku ahaado mid heerkiisu sarreeyo.”
John Terry ayay taageereyaasha Arsenal ee fadhiyey gudaha garoonka Stamford Bridge u istaageen markii la beddelay daqiiqaddii 26aad kulankii Sunderland, waxaanay ciyaartaasi ahayd middii lagu macasalaameeyey ee uu kaga fadhiisanayay ciyaaraha.
Antonio Conte oo waraysi siinayay telefishanka Sky Sports ayaa la weydiiyey sababtii daqiiqaddii 26aad uu u beddelay Terry, waxaanu yidhi: “Isaga ayaa go’aansaday oo doonayay, sababtoo ah 26 wuxuu ahaa lambarka uu kooxda u xidho, anigana farxad ayay ii ahayd inaan siiyo fursad.
“Waligay ma awoodi doono inaan si ku filan ugu mahad-celiyo. Aad ayuu muhiim iigu ahaa aniga iyo kooxdaba.”
Guushii 4-0 ahayd ee Chelsea ay ka gaadhay Manchester United, waxa uu tababare Antonio Conte rumaysan yahay inay horseed u noqotay inuu ku guuleysto horyaalka Premier League, waxaanu yidhi: “Shaqadayda qaab adag ayaan ugu noolaa. Mararka qaarkood waxaan muujinayay dulqaad, anigoo doonayay inaan la wadaago farxad taageereyaasha Chelsea oo aan xidhiidh cajiib ah la lahaa.
“Ciyaartaasi muhiim ayay noo ahayd sabbatoo ah marka aad 4-0 kaga guuleysato koox sare, waxay ku siinaysaa dhiirigelin, sababtoo ah, waxaanu fahamnay inaanu u dagaallami karayno inaanu horyaalka ku guuleysano.”